Alahady 13 Oktobra 2019. – FJKM
Alahady 13 Oktobra 2019.
Zavatra telo miavaka no ambara eto:
1-Fitarainana noho ny fanambinana ny ratsy fanahy (and1-6)
Zava-manahiran-tsaina ny mpivavaka maro ny hoe: « Nahoana no ambinina ny ratsy fanahy? Nahoana no miadana ny mpiodina rehetra? » Ny Sal 73 dia mamaofy izany lava . I Jeremia koa mba tratran’izany . Antony : rehefa nomena anao iJesoa dia omen’ Andriamanitra anao miaraka Aminy maimaipoana koa ny zavatra rehetra (Rom 8.31-32) . Ary na dia tsy takatrao aza ny fitondran’ Andriamanitra , ekeo fa hendry Izy , fitiavana Izy .
2-Fandaozan’ny Tompo ny Tempoliny sy ny vahoakany (and7-13)
Ny fahotana ifikiran’ny vahoakany dia mahatonga an’ Andriamanitra handao azy satria tonga efitra mampisaraka azy ireo Aminy izany heloka amam-pahotana izany (Isa 59.2) .Mampieritreritra lalina izany , raha ilaozan’ny Tompo ny Fiangonana , inona intsony no ilàna azy ?
3-Fitaizana ireo firenen-kafa (and14-17)
Firenena Jentilisa nikasikasika ny tanin’ Israely ireo sady nampiana-dratsy azy . Koa tsy havelan’ny Tompo ho afa-maina izy ireo , fa hovaliany tokoa . Israely kosa mbola hamindrany fo indray . Mahagaga izany !
« Raiso ny Tenin’ Andriamanira » Boky faha-6